आरुसलाई 'कोहि किन' यति मन परेको ? - MazzakoNews
Home / INTERVIEWS / आरुसलाई ‘कोहि किन’ यति मन परेको ?
आरुसलाई ‘कोहि किन’ यति मन परेको ?
Mazzako News 29th January 2017	INTERVIEWS, PHOTO GALLERY Leaveacomment
रञ्जन अधिकारी पोखरा / पोखराका युवाहरुको पहिलो प्रस्तुति ‘किन कोहि’ हालै सार्वजनिक भएको छ । जतिन नकर्मीको पहिलो गीत ‘थाहा छैन किन कोहि यति राम्रो लाग्छ’ युट्युब मार्फत Songs Nepal ले सार्वजनिक गरेको हो ।
गीतमा जतिनको स्वर छ भने भाष्कर मिश्रको शब्द र कम्पोज छ । रोनल परियार र असिम गुरुङले पनि म्युजिकमा साथ दिएका छन् । म्युजिक एरेन्जर दीपक बीएसके हुन् । यस्तै, भिडियो पोखराका विभिन्न स्थानमा छायाँकन गरिएको छ । आरुष थापा आई–डु र पूजा मगरले स्क्रिन शेयर गरेका छन् । खपौदी पामे, बसुन्धरा पार्क, हुक्का क्याफे बाटुलेचौर, बगर हाउजिङ, घारीपाटनका विभिन्न स्थानमा भिडियो सुट गरिएको हो । भिडियोको निर्देशन, सम्पादन अनिल शाहीले गरेका हुन् भने उनैले खिचेका हुन् ।
नेपाल टुरिज्म एण्ड होटल म्यानेजमेन्ट कलेजमा थर्ड सेमेष्टर अध्ययनरत आरुषको यो पहिलो म्युजिक भिडियो हुन् । युट्युबमा उनको कामको प्रशंसा भएकोमा आरुष उत्साहित छन् । राम्रा गीतहरुमा अफर आए आफू तयार रहेको आरुषले बताए ।
एपोस्टल रेकर्डिङ स्टुडियो प्रस्तुतिमा रहेको सो गीत पल्स डिजिटल स्टुडियोले अडियो व्यवस्थापन गरेको छ ।
Previous -यापदेखि फिल्मसम्म बहुप्रतिभाशाली बिनोद ‘बाजेले गितार बजाको सम्झदैं ‘
Next पत्रकार श्रीमती संघ गठन